Ihe ọghọm Zip na Costa Rica - Isgbọ mmiri ụgbọ mmiri ọ ga-akwụ ụgwọ?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Costa Rica » Ihe ọghọm Zip na Costa Rica - Isgbọ mmiri ụgbọ mmiri ọ ga-akwụ ụgwọ?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Costa Rica • Ịtụ egwu • trending Ugbu a
dere Hon. Thomas A. Dickerson
N’isiokwu nke izu a, anyị na-enyocha ikpe nke Wolf v. Celebrity Cruises, 2017 US App. LEXIS 5348 (11th Cir. 2017) nke Courtlọikpe ahụ kwuru na “Brent Wolf gbara ụlọ ọrụ OCT Enterprises, Ltd. akwụkwọ, na-azụ ahịa dị ka The Original Canopy Tour, na Celebrity Cruises, Inc., mgbe ha merụsịrị ahụ n’oge njem njem nke ọdụ ụgbọ mmiri. Ọ na-arịọ arịrịọ ụlọ ikpe mpaghara abụọ-otu na-agbagha ebubo a na-eme megide OCT maka enweghị ikike onwe ya, na nke ọzọ na-enye mkpebi nchịkọta maka ndị a ma ama. Mgbe a ọma nyochaa ọzọ 'briefs, ndekọ… anyị affirm ma iwu ”.
Wepụ Aka na Kashmir, Biko
Na ngagharị iwe a na-eme ihe ike megide India na-egbochi ndị njem nleta na Kashmir, etn.travel (4/29/2017) e kwuru na "Ime ihe ike kemgbe oge okpomọkụ gara aga, ọkachasị n'ụdị ndị agha India na-agba egbe egbe ndị mmadụ egbe egbe mgbe ndị ngagharị iwe tụbara okwute. , hapụrụ ndị nkịtị 84 nwụrụ na ihe karịrị ndị nkịtị 12,000 na ndị ọrụ nchekwa ndị agha merụrụ ahụ, Alazeera kọrọ ".
Turkey Na Ọgba aghara
Na Kingsley, Turkey kpochapụrụ 4,000 ndị isi ndị ọzọ, yana Blocks Wikipedia, nytimes.com (4/30/2017) achọpụtara na "Gọọmentị Turkey gbasaa mbibi ọ na-eme megide nnupụisi na nkwupụta okwu na ngwụcha izu, na-ehichapụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ gọọmentị 4,000, igbochi ịnweta Wikipedia na igbochi ihe ngosi egwuregwu egwuregwu telivishọn… Nchụpụ ndị ahụ pụtara na ihe dị ka mmadụ 140,000 ugbu a asachapụla na steeti na nkeonwe na ihe karịrị ndị otu obodo 1,500 mechiri, ebe ọ bụ na okpu ọchịchị dara n'afọ gara aga ”
Mass Die-Off nke Whales
Na Schlossberg, Mass Die-Off of Whales in Atlantic Is being Investigated, nytimes.com (4/27/2017) e kwuru na “Humpback whales na-anwụ n’ọnụ ọgụgụ pụrụ iche n’akụkụ Ọwụwa Anyanwụ sincewa kemgbe mbido afọ gara aga. Ndị ọkà mmụta banyere mmiri nwere okwu maka ya-'ihe ịtụnanya na-eme' ma ha enweghị echiche doro anya ihe kpatara ọ na-eme. Anụ whale iri anọ na otu nwụrụ na ọnwa 15 gara aga n'akụkụ ụsọ Oké Osimiri Atlantic site na North Carolina ruo Maine… 10 nke whale ka amaara na ọgụ ụgbọ mmiri gburu… Gburugburu ụwa enwere atụmatụ 30,000 na 40,000 humpback whales banyere a nke ato nke onu ogugu ya ”.
Uber Lelee Maka Didi Chuxing
Na Mozur, Site na Ego ohuru, Didi Chuxing, Uber Rival, Lee Anya Karịa China, ekwuru na “Mgbe Uber wepụrụ na China n’oge ọkọchị gara aga, ọ dị ka ngwụcha afọ abụọ asọmpi frenzied na onye mgba obodo Didi Chuxing . Ma site na ntinye ego ohuru nke wetara ijeri $ 5.5, o yiri ka ụlọ ọrụ China ọ chọrọ ịsọ asọmpi zuru ụwa ọnụ. Ntinye ego… ji ụlọ ọrụ ahụ kpọrọ ihe dịka ijeri $ 50… Ego ọhụụ ọhụụ nwere ike iweta Didi Chuxing na asọmpi ya na Uber: Ndị nyocha na-atụ anya na ụlọ ọrụ China ga-eji ego ahụ tinye aka na ahịa ọhụrụ yana iji zụlite teknụzụ kwụ ọtọ.
Anwansi Pipe ụgbụ $ 1 Nde
Na Reisinger, Cruise Ship Whistleblower na-ebugharị site na Ngozi Nde-Dollar, dailybusinessreview.com (4/20/2017) e kwuru na "Christopher Keays, onye obodo Scotland, dị afọ iri abụọ na asaa ma dị ọhụrụ na agụmakwụkwọ mmiri na oge ọkọchị nke afọ 27 mgbe ọ nwetara “ohere nke ndụ niile '' ịrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri dị ka injinia dị obere na Princess Princess nke Caribbean. Taa ọ bụ nde mmadụ. Otu onye ọka ikpe gọọmentị etiti na Miami nyere Keays $ 2013 nde Wenezde maka ịfụ ọkpọ na iwu Princess Cruise Lines 'na-atụfu mkpofu mmanu mmanu n'ime oke osimiri. Dịka akụkụ nke nkwekọrịta arịrịọ, onye ọka ikpe US District Judge Patricia Seitz nyekwara ụlọ ọrụ iwu ka ha kwụọ $ 1 nde ntaramahụhụ-nke kachasị buru ibu maka mpụ metụtara mmetọ ụgbọ mmiri nke ọma… Usoro ụgbọ mmiri ahụ ghakwara ụgha ndekọ, kesasịa ihe akaebe ma gwa ndị ọrụ ahụ ka ha ghaara ụgha ndị nyocha ahụ, dịka akwụkwọ ụlọ ikpe si kwuo, gụnyere ntinye nke ụgbọ mmiri 'n'ụlọ ikpe na akwụkwọ nkwado ya… (Onye ọka ikpe) tinyekwara usoro ụgbọ mmiri afọ ise oge ọhụụ n'okpuru ụlọ ọrụ nyocha corporate ụlọ ọrụ ahụ ga-eme ọtụtụ mgbanwe gburugburu ebe obibi na nnabata. shipsgbọ mmiri ya documents Dịka akwụkwọ ụlọ ikpe siri kwuo, Keays chọpụtara ma were 'vidio anwansi' na-amịpụta mmiri mmanu mmanu n'ụzọ na-akwadoghị mgbe a na-agbanye mmiri dị ọcha site na usoro ọzọ iji ghọgbuo kọmputa ahụ ma kpuchie iwu ahụ ezighi ezi ".
The Met: Ndị Na-abụghị Ndị Bi Njikere Jikere Paykwụ
Na Pogrebin, The Met Files bụ akwụkwọ eji eme ihe maka ebubo nnabata ndị ọbịa na-apụ na steeti, nytimes.com (5/5/2017) a chọpụtara na “Museumlọ ihe ngosi nka nke Metropolitan emeela ka otu nzọ dị nso na ụgwọ nnabata amanyere: Ọ gbara akwụkwọ na obodo a n'izu a iji kwụọ ụgwọ maka ndị ọbịa na-esite na steeti idea esemokwu na-enye echiche nyere Met bụ akụkụ nke ụtụ isi na-akwado ma ugbu a nwere naanị 'aro' ntinye ego. Ego a tụrụ aro ga-abụ 'naanị maka ndị bi na City nke New York na New York State'… 'Maka onye ọ bụla ọzọ, nnabata ahụ ga-abụ iwu'… Iche na mpe na ọ dị ugbu a ihe dịka $ 15, ndị Met nọ na-achọ ịzụlite Inye ego na mgbakwunye na mbelata ego. Ego sitere na ụgwọ nnabata ga-enyere aka inye ego a pụrụ ịdabere na ya, agbanyeghị na ụfọdụ na-ekwu na ọ nwere ike itinye ihe nkwado obodo na-akwado kwa afọ na ụlọ ebe ngosi nka dị ihe dị ka nde $ 26 ugbu a. Onu ogugu nke ugbua 'choro' nke Met, $ 25 maka ndi okenye, meputara ihe ruru $ 39 n'ime ego obodo 2016, ma obu 13 pasent nke ihe omuma ihe ngosi nka. A amanyere bụ iwu ego ga-abụ n'ịwa iri puku kwuru iri nde dollar ọzọ a afọ ”. Maka nkọwa ndị ọzọ lee isiokwu anyị Metropolitan Museum of Art's “Lezienụ Ihe W Chọrọ” klas ihe omume a chọrọ imezi, www.eturbonews.com (1/4/2017).
Gbọ na-efe efe, Onye ọ bụla?
Na Markoff, Agaghịkwa Nrọ: Silicon Valley Na-eburu Thegbọ Na-efe efe, nytimes.com (4/24. 2017) Achọpụtara na “Nke a abụghị akụkọ sayensị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ mmalite na nnukwu ụlọ ọrụ aerospace na-anwa ịrụ ụgbọ elu onwe gị ị nwere ike ịgba gburugburu obodo… N'ehihie na-adịbeghị anya, onye injinia aerospace na-arụ ọrụ maka obere ụlọ ọrụ Silicon Valley nke a na-akpọ Kitty Hawk na-anya ụgbọ elu na-efe efe n'elu ọdọ mmiri mara mma. ihe dị ka 100 kilomita n'akụkụ ugwu nke San Francisco. Tygbọ ala Kitty Hawk na-efe efe… bụ ebe a na-emeghe emeghe, mkpọchi paụnd narị abụọ na iri abụọ nke nwere ọnụ ụlọ maka otu onye, ​​nke ndị nrụgide batrị asatọ na-akwado nke na-ada nnukwu ụda dịka ụgbọ mmiri ọsọ. Techlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-atọ ụtọ na-akpaghasị ihe, n'oge na-adịbeghịkwa anya ndị na-akpaghị aka na-abụ nnukwu ihe mgbaru ọsọ. Arsgbọ ala ndị na-eji ọgụgụ isi eme ihe maka ịkwọ onwe ha, dịka ọmụmaatụ, anọwo na-arụ ọrụ ruo afọ ole na ole ma nwee ike ịhụ ha n'okporo ụzọ n'ọtụtụ obodo. Ma ugbu a, na-abịa na igwe nyocha, igwe na-efe efe nke anaghị adị ka Buick nna gị nwere nku ”.
Kwadoro ugbo ala kwurula na New York
Na Stashenko, Nnwale Ugbo ala Onwe Onye Enweta Green Light na NY, therecorder.com (4/24/2017) Achọpụtara na "mmefu ego ọhụụ New York gbanwere iwu na-egbochi ụgbọ ala na-enweghị ọkwọ ụgbọala, na njem nke Govan Andrew Cuomo nwere olile anya ga-enyere ike guzobe ụlọ ọrụ ọhụrụ na steeti. Ihe ndokwa a na-enye ohere maka usoro nnwale otu afọ nke ịnya ụgbọ ala na teknụzụ ụgbọ ala na-adọba onwe ya n'okporo ụzọ ọha na eze n'okpuru nduzi nke ndị uwe ojii steeti New York. Iwu ahụ chọrọ ka ụgbọ ala ndị kwụ ọtọ na-ebu opekata mpe $ 5 na mkpuchi mkpuchi… Cuomo kwuru na ya chọrọ ndokwa na mmefu ego yana ikike iji gbasaa ịnyịnya-ịkekọrịta na mpụga New York City… n'ihi na o kwenyere na e nwere ụfọdụ nnukwu teknụzụ , ebe a na-eme nnyocha na mahadum dị na steeti ahụ ugbu a, dị ka Utica na Albany ebe ọrụ na ụgbọ ala kwụụrụ onwe ya nwere ike ibute mmepe azụmahịa na-aga n'ihu ”.
Ndị njem "jidere njigide" Na Cancun
Na ndị njem ndị Juu na-ekwu na ha nwere 'njigide' site na nkwari akụ Cancun na esemokwu ụgwọ, Yucatan Times (4/23/2017) e kwuru na "Ihe dị ka ndị njem US 550 bụ ndị na-ekwu na otu ụlọ oriri na ọ Canụ Canụ Cancun 'jidere ha' n'ihi ebubo ebubo na ha akwụghị ụgwọ ego akwụghachiri na ezumike ndị Juu ha nwere nsogbu na Cancun, ha na-ekekwa otu nkwado cyber na Facebook, What's App na nzukọ ndị Juu dị ka DansDeals.com. Akwụkwọ akụkọ ndị Juu na-aga n'ihu na-akọ na ha na-agbanwe akụkọ agha banyere ihe kwesiri ịbụ njem Ngabiga nke okomoko, nke ihe eji eme njem akpọrọ Paradaịs Paradaịs. Nkebi ahịhịa ikpeazụ bụ na ndị ọrụ ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ na Royalton Cancun Hotel & Resort nọrọ na Eprel 19 ka ha gbalịrị ịlele-enyere ha ụgwọ maka ihe ekwesịrị ịkwụ ụgwọ zuru ezu ịkwụ ụgwọ… 'Thelọ nkwari akụ ahụ bụ akụkụ kachasị mma nke mmemme a 'kwuru Maazị X bụ onye gara njem ahụ ya na ezinụlọ ya…' N'abalị mbụ Sedar, enweghị matzo, enweghị shmura matzo. E nwere akara ndị mmadụ n'ọnụ ụzọ kichin, ọgụ mgba, na-anwa inweta matzos atọ na tebụl '… Dabere na ọtụtụ ndị ọbịa, onye nwe ihe mmemme ahụ hapụrụ ụlọ nkwari akụ na elekere anọ nke ụtụtụ iji zere ịkwụ nnukwu ụgwọ, si otú a pụọ ọbịa ga-aza arịrịọ si na họtel maka ịkwụ ụgwọ… Mgbe ndị ọbịa nwara ịlele Royalton Riviera… a gwara ha na ha enweghị ike ịpụ ruo mgbe ha kwụrụ ọtụtụ puku puku dollar ọ bụla letter Akwụkwọ ozi onye ọka iwu kwenyesiri ike na ndị nlekọta ụlọ oriri na ọ hotelụ toụ ka ha hapụ ndị mmadụ na-aga ”.
Saịtị Njem Njem
Na Peterson, Kedu Ebe Nchọta Njem Kacha Mma? Ọ dabere na ihe mgbaru ọsọ gị, nytimes.com (4/18/2017) ọ bụ kwuru na “Na mbu ị kpọrọ ụlọ ọrụ ụgbọelu ma ọ bụ ndị njem mgbe ị chọrọ itinye akwụkwọ maka njem. Ma ọ bụrụ na ịmechara ihe ọ bụla n'ime afọ 15 gara aga, ị ga-ahụrịrị onye na-arụ ọrụ ego ma ọ bụ saịtị metasearch. Ọtụtụ narị ndị iwu zuru oke zuru oke dị adị; obi abụọ adịghị ya na ị nụla banyere Expedia, Priceline na Hotwire, ịkpọ aha atọ. Ọ nwere nsogbu saịtị ị na-eji, ka ha niile bụ otu? Ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị a na-aga n'ịntanetị, ma ọ bụ OTA na saịtị ọchụchọ na-ehichapụ data sitere na isi mmalite ndị ọzọ, hazigharịrị ma chee ya n'ihu gị, onye ọrụ. Ilu abụọ ahụ 800-paụnd gorilla na ụwa njem bụ Expedia Inc. Na Priceline Group. Ha ọnụ, ha nwere ọtụtụ isi saịtị ntinye akwụkwọ njem ”. N'iji Travelocity, Kayak na Hipmunk nweta ozi na ọnụahịa maka ụgbọ elu, họtel na ngwugwu.
Uber Na France
Na Griffin, France, Uber Argue Over Definition of Transport Services, jdjournal.com (4/24/2017) a chọpụtara na “Uber kwuru na ha bụ ọrụ dijitalụ. France kwenyere na ha bụ ọrụ njem. Companylọ ọrụ ngwa ngwa na-agba ịnyịnya US na-aga n'ihu ụlọ ikpe kachasị elu na Europe mgbe ọ nọsịrị na mba ahụ afọ ise, na-anwa ịkọwa na ha na-enye ndị ọrụ dijitalụ ihe niile. Uber na-ekwukwa na iwu French lekwasịrị ọrụ tagzi n'ịntanetị. Uber echewo ihu iwu iwu siri ike na ngbalị ha na ịkọwapụta ọrụ tagzi na ọrụ ịntanetị law Iwu French na 2014 tinyere ókè tagzi na ọrụ ndị ọkwọ ụgbọ ala. Ọ bụ mmebi iwu ugbu a ịhazi ọrụ tagzi na-akwadoghị, na-etinye ikike na iji sọftụwia ịchọta ndị na-agba ịnyịnya n'okporo ámá. Uber hụrụ iwu ka ebubere naanị maka ọrụ ịntanetị… Uber amachibidoro ya n'ọtụtụ mba na obodo niile na Europe mgbe ọ kwụsịrị ikpe na Spain, Belgium, Germany na France. Uber nwekwara ikpe na ụlọ ikpe ga-ekpebi gbasara nhazi ha na Barcelona. Onye isi tagzi na mba a arịọla ECJ ka ọ kpebie ma Uber ọ bụ ọrụ dijitalụ ma ọ bụ nke njem ”.
Iwu Iwu Njem Izu
“N’ọnwa Ọktọba nke 2012, Maazị Wolf, nwunye ya, Patricia Cannon, na otu enyi ha, Beverly Falor, kwọọrọ dị ka ndị njem banye Cefinbrity Infinity. Nwada Cannon zutara ya na Mazi Wolf site na ndi njem. Maazị Wolf natara nkwekọrịta njem ụgbọ mmiri nke kwuru na 'ndị na-enye ọrụ, ndị nwe ha na ndị ọrụ ha' njem njem na njegharị 'bụ ndị ọrụ nọọrọ onwe ha ma ha anaghị arụ ọrụ dị ka ndị ọrụ [ndị ama ama] ma ọ bụ ndị nnọchi anya'. Maazị Wolf na Oriakụ Falor zụtara tiketi na tebụl njem ụgbọ mmiri dị na Infinity iji sonye na ọrụ zip zip na ebe nchekwa nke onwe na Costa Rica na Ọktoba 15, 2012. Tiketi ndị ahụ kwupụtara ọzọ na ndị na-enye njem njem na njem. 'bụ ndị ọrụ ngo nọọrọ onwe ha ma ọ bụghị ndị ọrụ [ndị ama ama] ma ọ bụ ndị nnọchi anya ha'. Maazị Wolf bịanyere aka na akwụkwọ ikike ịkwụsị; nke OCT nyere, nke kwuru na ọ bụ OCT nwere ma na-ejegharị ejegharị zip-line ahụ ”.
“Njem nlegharị anya ahụ nwere nyiwe ịchọpụta ihe iri na ụzọ iteghete. N’otu n’ime njem ndị a, Maazị Wolf kwụsịrị ma ọ bụ jiri nwayọ nwayọ kwụsị ngwụcha zip-line ahụ wee kpọdaa n’elu ikpo okwu. O merụrụ nnukwu ahụ, tinyere mwakpo akwara nwa ehi ya na ụkwụ aka ekpe ya. Maazị Wolf kwusiri ike na ọ laghachila azụ n'oge a na-agagharị na ọ hụghị ikpo okwu ka ọ na-erute ya. Ọ na-ekwusi ike na ọ maghị otu esi agbanye onwe ya n'ihi na ndị ọrụ OCT adịghị agwa ya ka esi eme ya. Ọ na-ekwukwa na ya enweghị ike ịbelata nwayọ maka na ọ bụ gloves gloves nke OCT na-enye ezughi oke, na a bumper na-efu efu site na ebe ọdịda ya dabara ".
“Na mkpesa, Maazị Wolf kwupụtara nleghara anya na-eleghara OCT anya na ebubo megide Celebrity n'okpuru echiche nke ibu ọrụ siri ike. O boro ebubo na ndị ama ama leghaara anya n'ịghara ịdọ ya aka ná ntị banyere ọnọdụ dị egwu na nleghara anya na ịnweta ego na ijigide OCT. O kwukwara na Celebrity nwere ike ịdaba na OCT na-eleghara anya na-eleghara anya n'okpuru echiche nke ụlọ ọrụ n'ezie, ụlọ ọrụ doro anya, na njikọta ọnụ. Ọ kwusiri ike na ọ bụ ya bu n'obi na ọ ga-erite uru na nkwekọrịta ahụ n'etiti Celebrity na OCT, na Celebrity emebiwo ọrụ nkwekọrịta ya na ya ".
“Maazị Wolf kwusiri ike na OCT nọ n'okpuru ikike nke onwe ya n'okpuru iwu ikike ikike obodo Florida niile… Anyị na-amalite na ikike izugbe… Ruo ka Maazị Wolf kwuru na adreesị Miami nke edepụtara na Agreement Tour Operator ga-eme ka izugbe. ikike, OCT zuru oke ịgbagha esemokwu a (na nke a) adreesị a bụ naanị ebe a na-ebugharị akwụkwọ ozi a na-eji n'ihi usoro ozi a na-apụghị ịdabere na Costa Rica Mr. Ruo na Mr. Wolf na-atụ aro na The Original Canopy Tour-USA, LLC dị ka enyemaka ma ọ bụ ihe ọzọ metụtara ya, ga-eme ka ikike nwee ikike, ọ rụghị ụka banyere etu njikọ a si 'dị oke mkpa' iji mee ka ọ bụrụ otu n'ime 'okwu' pụrụ iche nke ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ nọ 'n'ụlọ' na nnọkọ ndị ọzọ karịa ebe nsonye ya ma ọ bụ ebe azụmaahịa ''.
“Maazị Wolf anaghị ekwu na OCT mere omume obi ọjọọ na Florida na enweghị ike ikwupụta ikike a kapịrị ọnụ dabere na ebubo ịta ahụhụ ọ bụla metụtara ihe ahụ mere na Costa Rica. Kama nke ahụ, ọ na-arụ ụka na akọwapụtara ikike a kapịrị ọnụ site na asụsụ n'asụsụ Tour Operator Agreement nke e mere na Miami, Florida n'etiti OCT na Celebrity, nke ya na ndị njem ndị ọzọ na-ekwu na ha na-erite uru nke ndị ọzọ. Dị ka a tụlere n'okpuru, Otú ọ dị, Mt. Nkwupụta Wolf kwuru na ọ dara iwu nkwekọrịta sitere na echiche nke ndị ọzọ na-erite uru n'ihi na asụsụ nke nkwekọrịta ahụ gosipụtara n'ụzọ doro anya ebumnuche ọ bụla iji baara ndị ọzọ uru. N'ihi na ebubo ahụhụ na-eme mpụ mere na mpụga nke Florida, ọ nweghịkwa nkwekọrịta n'etiti nkwekọrịta ahụ na Mr. Wolf kpatara omume (enwere) ikike onwe onye maka OCT ".
Ọrụ Wdọ Aka ná Ntị
“Maazị Wolf bu ụzọ na-ekwu na Celebrity ji ya ụgwọ iji nlezianya na-adọ ya aka ná ntị banyere ọnọdụ ọ bụla dị ize ndụ nwere ike ịdịrịrị na njem njem. Anyị kwenyere na, na ndekọ a, Celebrity enweghị ọkwa nke ọnọdụ dị egwu, na, na-enweghị ọkwa, enweghị ọrụ dị otú a… Onye nwe ụgbọ mmiri na-akwụ ndị njem ya ụgwọ igosipụta 'ezi uche dị na ọnọdụ n'ọnọdụ ndị a' (na-ezo aka Franza v. Royal Caribbean Cruises, Ltd., 772 F. 3d 1225 (11nke. 2014)). Nke a gụnyere 'ọrụ ịdọ aka ná ntị banyere ihe egwu ndị amaara gafere na njedebe na ebe a na-akpọ ndị njem òkù ma ọ bụ na-atụ anya ileta' '(na-ezo aka Chaparro, 693 F. 3d na 1336). Mana ọrụ ịdọ aka ná ntị 'gụnyere naanị ihe egwu nke onye ọrụ ụgbọ mmiri maara, ma ọ bụ nwee ezi uche kwesịrị ịma'. N'ihi ya, dị ka ihe dị mkpa iji nye iwu, onye na-ebu ụgbọ mmiri aghaghị ịnwe 'ọkwa ma ọ bụ nke bara uru banyere ihe ọghọm = imepụta ọnọdụ' (na-ekwu maka Keefe v. Bahama Cruise Line, 867 F. 2d 1318 (11th Cir 1989) ”.
N'ihi ịdị uchu rụrụ
“Anyị enweghị ike ikwubi na Onye ama ama ama ama ama ọ dị ọnọdụ dị egwu. Anyị apụtaghị na anyị ga-atụ aro na ụgbọ mmiri nwere ike ịhapụ ibu ọrụ ya nke ilezi anya nke ọma nye ndị njem ya, mana ebe ndekọ a na-egosi na ndị ama ama duziri ịdị uchu ya na njedebe na enweghị isi ihe kpatara ịjụ nchekwa nchekwa nke akara zip nke OCT. arụ ọrụ… OCT na-ahụkarị dị ka onye na-eduga n'ahịa na njem kandụl njegharị Ad Celebrity họrọ bụ maka nke a. Ndekọ ahụ egosighi ihe akaebe ga - eme ka ndị ama ama mara ọkwa banyere ọnọdụ ọ bụla dị egwu nwere ike ịdị adị ma ọ nwere ike ịchọ ka eme ụfọdụ ihe n'akụkụ ya ”.
Enweghị Ihe Akaebe nke Nchedo Nchedo
“O juru anyị anya na, ihe karịrị afọ iri, Amara anabataghị akụkọ ọ bụla merenụ-ọbụlagodi ndị na-eme site n’enweghị nleghara anya n’ihe niile gbasara nchekwa nchekwa nke ndị njem site na OCT maka mmemme nke gụnyere ndị sonyere n’afọ niile, nha na ahụike na ahụmịhe mmụba na-agba gburugburu. ikuku n'elu oke oso. Agbanyeghị, nkwenye abụghị ihe ọzọ iji nweta ihe akaebe. Ihe ndekọ a enweghị ihe akaebe doro anya nke nchegbu nchekwa ma ọ bụ akụkọ banyere mmerụ ahụ kpatara nchedo nchekwa. Iji weta ọrụ n'okpuru ọnọdụ ahụ ga-abụ itinye aka na itinye ikike siri ike na Celebrity Ne (Ọ nweghịkwa nkwado zuru oke maka ọrụ ịme nyocha nyocha nke OCT n'ihi na Mr. Wolf) edobebeghị na, na-anọghị ọkwa, achọrọ ndị a ma ama mee nnyocha nyocha ”.
Enweghị ụkpụrụ ụlọ ọrụ maka nyocha nchekwa
“Maazị Wolf enweghị ike igosipụta ihe akaebe zuru oke na ụkpụrụ ACCT [Association for Challenge Course] gosipụtara ụkpụrụ omenala ma ọ bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Maazị Kempfe (onye guzobere ACCT) kọwara ACCT dị ka 'nzukọ mba ofesi na-eje ozi na zip zip ịma aka obodo, na-ede ụkpụrụ ma na-enye ndị nkuzi n'ofe ụwa niile'… Mr. Kempfe gbakwara akaebe na ACCT abụghị ụlọ ọrụ gọọmentị, yana enweghị ụkpụrụ ma ọ bụ av chọrọ ụlọ ọrụ ịgbaso ụkpụrụ ndị ACCT nyere statements Nkwupụta ndị a na-emezughị igosipụta ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke onye na-agụta eziokwu nwere ike ịtụle n'ịchọpụta ma Ndị ama ama mebiri ọrụ dịịrị ndị njem ya site na ịghara ịme nyocha kwa afọ, ma ọ bụ nyocha nke onye na-abụghị ọkachamara ”.
Ibu Ọrụ Compgbazinye iregwọ Ọrụ
“Ndi ama ama gosipụtara ihe akaebe banyere usoro nhọrọ ya na ihe kpatara ịhọrọ OCT. Kpọmkwem, onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ama ama… gbara ama na n'ịhọrọ ndị na-eme njem nleta, ndị a ma ama na-anabata ọnụ ahịa sitere na ụlọ ọrụ njem dị iche iche wee họrọ ụlọ ọrụ ahụ site na ịga na akụrụngwa ma nyochaa ihe dị iche iche, dịka ọkwa nchekwa na ọnụahịa… OCT nwere 'isi ederede akwụkwọ ahụ na zip zip. 'n'ihi na ha bụ ndị mbụ mere ya (ma) na-arụ ọrụ afọ atọ tupu oge eruo na ndị mmadụ n'ozuzu nwere aha ọma maka nchekwa… ndekọ ahụ enweghị ihe akaebe na-egosi na OCT erughị eru ma ọ bụ na ọ tozuru oke ime njem njem-mush obere Ndị ama ama ama ma ọ bụ kwesiri ịma banyere adịghị ike ọ bụla… anyị enweghị ike ikwu, na ndekọ a, na ndị ọka ikpe nwere ezi uche nwere ike ikwubi na ndị ama ama leghaara anya na ịnata ego ma ọ bụ na-aga n'ihu na-ejide OCT dịka onye ọrụ njem njem.
Courtlọikpe ahụ kpochapụrụ echiche ndị ọzọ nke ndị gbara akwụkwọ gụnyere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ doro anya ("Ntinye Ahịa na Shore Exursion Ticket-nke kwupụtara n'ụzọ doro anya na ndị na-eme njem njem bụ ndị ọrụ ngo onwe ha ma ọ bụghị ndị nnọchi anya ma ọ bụ ndị nnọchi anya Celebrity yana OCT Liability Waiver, nke kwughachiri na ọ bụ OCT nwere ma na-arụ ọrụ njegharị zip ahụ), njikọ aka ọnụ ("Njikọ Njikọ Njem ahụ anaghị emepụta ikike njikọ nke njikọta n'ihi na ọ bụ naanị OCT ka ọ na-achịkwa") na ndị ọzọ na-erite uru ("Tour Operator" Agreement adịghị egosipụta ebumnuche iji rite uru na nke atọ ọ bụla - kama, ọ na-ekwupụta n'ụzọ megidere: 'Agreement agaghị aghọrọ ịnye mmadụ nke atọ ọgwụgwọ, nkwupụta, ikike ma ọ bụ omume nke ikike ọzọ ").
Onye dere ya, Thomas A. Dickerson, bụ onye ọlụlụ lagoro ezumike nká nke ngalaba mkpegharị ikpe, Ngalaba nke abụọ nke Supremelọikpe Kasị Elu nke New York ma na-ede banyere Iwu Njem maka afọ iri anọ na otu tinyere akwụkwọ iwu ọhụụ emelitere kwa afọ, Law Travel, Law Journal Press (41), Litigating International Torts na US Courts, Thomson Reuters WestLaw (2016), Omume klaasị: Iwu nke 2016 States, Law Journal Press (50) na ihe karịrị 2016 ederede iwu ọtụtụ n'ime ha dị na nycourts.gov/courts/ 400jd / taxcertat.shtml. Maka ozi banyere iwu njem na mmepe, ọkachasị, na mba ndị so na EU lee IFTTA.org
Agaghị edepụtagharị isiokwu a na-enweghị ikike nke Thomas A. Dickerson.
Gụọ ọtụtụ n'ime Edemede Dickerson nke ikpe ziri ezi Ebe a.